दिवाकर बागचन्द - कान्तिपुर समाचार
दिवाकर बागचन्दका लेखहरु :
चेखव, गान्धी र कोरोना महामारी
कोरोना भाइरस अमेरिकामा द्रुत गतिमा फैलिइरहेको थियो । हेर्दाहेर्दै न्यूयोर्क कोरोनाको इपिसेन्टर बनिसकेको थियो । हजारौ मानिसझैं म पनि कोठाभित्रै बस्न बाध्य थिएँ । सुरुका दिनमा बिश्वभरीका समाचार हेर्दै बिते । केही दिन संगीत सुन्दै बिते । बाँकी दिन पढ्दै बिते ।
अमेरिकामा पनि जातकै कुरा
म जातिप्रथा मान्दिनँ । बाबासाहेब भीम राव अम्बेडकरको जातिवादको अन्त्य (एन्हिलिसन अफ कास्ट) पढेपछि मेरो मान्यता झन् प्रगाढ भएर आयो । एन्हिलिसन अफ कास्टमा अम्बेडकरले जातिप्रथाको अन्त्य हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
मलाई सानैदेखि मानिसभन्दा जनावर मन पर्छ । त्यसमा पनि कुकुर मेरो प्रिय । कुकुरको मानव प्रेम, स्वामी भक्ति, इमान्दारीबारे थाहा नहुने सायदै कोही होलान् ।
मैले काम चलाऊ परिवार धेरै देखेको छु । हेर्दा गजबको देखिन्छ, श्रीमान् राजा, श्रीमती रानी । बच्चाहरू राजकुमार, राजकुमारी । श्रीमान् र श्रीमती राती ओछ्यानमा सँगै हुन्छन् तर दुईबीच दुरी कहिल्यै कम गर्न नसकिने हुन्छ ।
मैले कुनै नाम चलेको अभिजात्य वर्गका छोराछोरी पढ्ने स्कूल पढ्ने मौका पाइन । प्रतिष्ठित कलेज या विश्वविद्यालयमा पढ्ने कुरा त कल्पना भन्दा बाहिरकै कुरा भयो । ठुला ठुला शिक्षण संस्थाबाट शिक्षा हाँसिल गरेका व्यक्तिहरुप्रति मेरो सदैव आदरभाव रह्यो ।
जो चुपचाप मरेनन्
प्रसिद्ध लेखक खुश्वन्त सिंहले आफ्नो "नट अ नाइस म्यान टु नो" भन्ने किताबमा "मरणोपरांत” भन्ने लेखमा आफु मरेपछि आफ्नो श्रदाञ्जली पत्रिकाले कस्तो लेख्लान् र त्यसपछि आफन्त, मित्र, विभिन्न व्यक्तिले कस्तो प्रतिक्रिया देलान् भन्ने बारे लेखेका छन् ।
समाजले सम्मान पूर्वक नबोल्दा एउटा ठुलो समुदाय आहत् भएको सत्य कसैदेखि छुपेको छैन । कतिपयलाई लाग्ल 'तिमी' भन्दैमा, जातीय कुरा गर्दैमा दुख्नु पर्ने के छ र? दुखाइ भोगेकासंग हुन्छ, पीडा साटेर त हेर्नुस् अनि थाह हुनेछ दुखाइ के हो भनेर ।
आमाको कुरा गर्दा पाकिस्तान को नाम ? पाठकहरुलाई अलि अनौठो लाग्ला । संयोग भनौं गोर्कीको आमा पछि मैले एउटा आमाको आँशुको बारेमा कविता पढ्ने अवसर पाएँ । त्यो कविता पकिस्तानी कवि फैज अह्मेद फैजको थियो ।
अटल बिहारी बाजपेयीलाई श्रदान्जली दिन पुगेका सामाजिक न्याय अभियन्ता स्वामी अग्निवेश तथाकथित भारतीय जनता पार्टीका कार्यकर्ताद्वारा कुट्पिट गरिएपछि आफु हिन्दू हुनुमा मलाई लघुताभास हुनथाल्यो ।